Buckwheat n'ime ite na oven - Ezi ntụziaka na anụ, ọkụkọ, mushrooms na ọkụkọ obi
Buckwheat n'ime ite na oven - ihe nchịkọta kachasị ụtọ maka ịkwadebe efere dị mfe
Buckwheat n'ime ite na oven na-enweta ọmarịcha pụrụ iche ma si na banal kwa ụbọchị na-etinye n'ime ihe ndị ọzọ nụchara anụcha na-acha ọchị mejupụtara. Kwadebe nri nwere ike ịbụ na mgbakwunye nke anụ ọ bụla, akwụkwọ nri, mushrooms, na-etinye oge ọ bụla zuru oke nchikota.
Esi esi esi nri buckwheat n'ime ite na oven?
A na-eji ihe dị mfe ma dị oké ọnụ ahịa rụọ Porridge buckwheat, na-enweghị mkpa ọhụụ. N'iburu ụzọ nhazi na ihe ndị dị mkpa, onye ọ bụla nwere ike ịnagide ọrụ ahụ.
A na-ahazi buckwheat groats ma saa ọtụtụ ugboro.
Mgbe ị na-achọ anụ ahụ na anụ, belata ya na obere mpekere, jiri ya dị ọhụrụ ma ọ bụ na-acha nchara nchara na ntanye frying na mmanụ.
Olu nke mmiri mmiri: mmiri ma ọ bụ efere kwesịrị ịbụ na ọ na-ekpuchi ọdịnaya nke ite.
Na-akwadebe buckwheat porridge n'ime ite na oven, dabere na uzommeputa si 30 nkeji na 1.5 awa.
Chicken na buckwheat n'ime ite na oven
Ihe kachasị mfe ma dị ụtọ n'isiokwu a bụ buckwheat na ọkụkọ na ite. Ị nwere ike iji fillet ọkụ ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ nke anụ ahụ, buru ha mmiri ruo minit iri abụọ na ise, wee frying ya na carrots, eyịm, na-agbakwunye garlic na njedebe. Site na ngwaahịa ndị a kapịrị ọnụ ị ga-enweta nri nri anọ.
ọkụ fillet - 400 g;
carrots na eyịm - 1 pc.;
garlic - 4 ezé;
mmanụ - 40 ml;
laurel - 2 iberibe;
Bọta - 40 g;
oge maka ulo ozuzu, nnu, ose.
Chicken na promarinovannuyu na seasonings ọkụkọ kpaliri na mmanụ na mmanụ.
Tinye eyịm na carrots, ighe maka nkeji 3, tinye garlic, buckwheat ma kpoo ọkụ maka nkeji ise.
Debe ọtụtụ ite, tụba ọkara ọ bụla nke laurel ahụ, wụsa mmiri na-esi mmiri, tinye nnu, kpuchie ma hapụ minit 30 na oven.
Nkeji iri na ise tupu uto nri, tinye mmanụ na ite ọ bụla.
Buckwheat na anụ ezi n'ime ite na oven
A na-enweta anụ ezi anụ ezi na-atọ ụtọ n'ime ite na oven. Dịka akụkụ mmiri, i nwere ike iji ma mmiri ma efere: anụ ma ọ bụ ihe oriri, na-ekpocha ya na obụpde. Ọ bụrụ na achọrọ, a pụrụ itinye mushrooms ole na ole na anụ na akwukwo nri, nke ga-eme ka efere dịkwuo ụtọ.
anụ ezi - 400 g;
carrots na eyịm - 1,5 PC.
mmanụ ọka - 40 ml;
ngwa nri, nnu, ose, mmiri ma ọ bụ efere.
Iberibe anụ ezi ahụ n'ime cubes, ghee na mmanụ.
Gbakwunye eyịm na carrots, gafee na anụ, dina na ite.
Tinye na nke ọ bụla dịka 3 tbsp. spoons nke kwadebere buckwheat, ½ kloovu garlic na laurel.
Wunye ihe niile na-ekpo ọkụ, flavored broth, na-ekpuchi arịa ndị nwere mkpuchi ma tinye ya na oven dị ọkụ ruo ogo 150.
Mgbe ọ na - agụ 1.5, buckwheat na anụ ezi na ite ga - adị njikere.
Azụ na buckwheat n'ime ite
Ihe na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ ihe ijuanya na ọ dị ụtọ nchịkọta anụ na nnu n'ime ite ọkụ ga-amịpụta ihe ụtọ nke onye ọ bụla gọọm ma jụọ ihe ọ bụla na-eri nri siri ike. Na nke a, ọdịnaya nke ite ndị ahụ jupụtara na efere ma ọ bụ mmiri na-atụ oyi ma tinye ya na oven.
amịrị - 600 g;
mmanụ na mmanụ aṅụ - 40 g;
Bee ihe amuru azu a ka o wee mebie mmanu ohia, tinye n'ime ite.
Tinye yabasị na karọt sliced, cloves nke garlic, laurel, sizinin, buckwheat.
Dejupụta ihe dị n'ime ya na efere, kpuchie ya na lids ma debe ya na oven.
Gbanyụọ ngwaọrụ ahụ site n'ịgbanwe ya ogo 180.
Mgbe 1.5 awa buckwheat na amịrị n'ime ite na oven na-esi mmanụ ma na-agbazi nkeji minit 10 ọzọ.
Buckwheat na mushrooms n'ime ite na oven
Buckwheat na mushrooms n'ime ite ahụ bụ ezigbo ndị na-ebu ọnụ, maka ndị na-eri anụ ma ọ bụ na-achọ ka ha gbanwee usoro nchịkwa ha na-agwụ kwa ụbọchị. Iji mezue uzommeputa mgbe nile kwesiri mushrooms, oyster mushrooms, na oke ohia mushrooms ga-eme ka efere buru ihe na-adighi nma ka o rie ya na ihe ijuanya na-esi ísì.
carrots na eyịm - 2 PC.
bọta agbaze - 50 g;
ncha, nnu, ose, mmiri ma ọ bụ akwukwo nri.
Na frying bee mushrooms.
Gbakwunye eyịm na carrots, ighe ruo ọkara dị njikere, dina na ite.
Oge ikpo ọkụ, tinye buckwheat, wụsa na efere ma ọ bụ mmiri.
Tinye ite na oven, nke a gbanwere na ogo 200.
Mgbe minit 40, buckwheat na mushrooms n'ime ite na oven ga-adị njikere.
Buckwheat na ụzọ onye ahịa na ite - uzommeputa
Buckwheat na-azụ ahịa na ite na-esiri anụ ọ bụla na mushrooms esie ya. A na-ejikarị ude mmiri na-eme ka ihe ahụ mejupụtara, na-atụgharị ya na mmiri ma ọ bụ efere tupu etinye mmiri mmiri na arịa. A ga-enweta uto uto nke efere ma ọ bụrụ na ị tinyekwuo ose Bulgarian ma ọ bụ tomato ọhụrụ n'ime ya, na-azọpụta ha site na pelts.
ọkụkọ ma ọ bụ anụ ezi - 300 g;
mmanụ - 40 g;
ude uto - 200 g;
esi nri, nnu, ose, mmiri ma ọ bụ efere.
Fri anu na iche na anu ohia na carrots, tinye ha n'ime ite.
Tinye garlic, laurel, seasonings, buckwheat.
Buputa ude mmiri ude nke iko ma obu mmiri, gbakwunye mmiri mmiri iji kpuchie ya.
Mgbe ihe ruru elekere iri na itoolu, buckwheat n'ime ite na oven ga-adị njikere.
Chicken obi na ite na buckwheat
Ọ bụ ezie na ihe dị mfe na mmefu ego nke obi na buckwheat n'ime ite ndị a na-agaghị echefu echefu ma na-esi ísì ụtọ. A na-enye amara dị mma na cheese, bụ nke na-fesa elu nke ihe dị n'ime ite ahụ tupu a gwakọta ya n'okpuru mkpuchi. Mgbe awa 1.5 gachara, a ga-edozi maka anọ.
obi - 500 g;
Iberibe obi ndi nwere obi na carrots na eyịm, gbakwunye garlic, kpoo oku, dina na ite.
Tinye buckwheat, cream cream, seasonings, wunye na mmiri ma ọ bụ efere, fesaa na cheese.
Nri ụtọ na minit 35 na ogo 190.
Buckwheat na sausaji n'ime ite na oven
Ọbụna mfe esi nri buckwheat na ite na sausages. N'okwu a, ọ bụ naanị eyịm na carrots na-eghe eghe, e mesịa, a na-etinye ihe niile dị na ite, jupụta na mmiri wee zite ya na oven n'okpuru mkpuchi. Ọ bụrụ na achọrọ, uto nke efere nwere ike iche site na ịtinye ude mmiri, tomato ihendori, tomato ma ọ bụ cheese.
nnu, ose, ngwa nri.
N'ime ite ahụ, dina ụra, wee na-agafe na akwụkwọ nri na sliced ​​sausages.
Tinye ihe dị n'ime ya, wụsa mmiri ma tinye ya na oven.
Mgbe minit 30 nke na-agwụ agwụ na ogo 200, efere ga-adị njikere.
Gwa na ite na buckwheat na anụ
Inye na buckwheat n'ime ite dị iche iche dị iche na efere e ji anụ ọ bụla mee. Na nke a, a na-ejikọta ihe ndị ahụ na mushrooms, na ude mmiri na-egbuke egbuke na tomato a na-etinye na broth, nke na-enye efere ahụ ọgaranya pụrụ iche na ihe ọkụkụ na-enweghị atụ. Mgbe awa 2 gasịrị, nri ahụ ga-adị njikere maka mmadụ 4.
anụ - 400 g;
ude uto - 150 g;
tomato ihendori - 150 g;
nnu, ose, mmiri, cheese.
Ghee ruo mgbe ihiere, anụ na mushrooms na eyịm na carrots, dina n'elu arịa.
Add garlic, seasonings, buckwheat, cream cream and tomato, wunye n'ime mmiri.
Mgbe awa 1.5 gachara, buckwheat na anụ n'ime ite ga-adị njikere.
Wụ nri ahụ mgbe ị na-eje ozi cheese na elu.
Buckwheat na akwụkwọ nri na ite na oven
Buckwheat na akwụkwọ nri na ite ga-abụ nri magburu onwe ya ma ọ bụ kwadoro dị ka ejiji na anụ ọkụkụ, azụ. Ọ bụrụ na ọchọrọ, ihe ndị ahụ nwere ike ịdịgasị iche dịka nhọrọ ya ma ọ bụ nnweta ngwaahịa, dochie otu ihe oriri na onye ọzọ ma ọ bụ tinye ndị ọhụrụ. N'ime awa otu efere ga-adị njikere maka anọ.
Akwukwo Bulgarian, carrots na eyịm - 1 pc.
Bọta - 60 g;
nnu, ose, mmiri, elu.
A na-akwadebe akwụkwọ nri, bee n'ime cubes ma jikọta ya na ịcha buckwheat, seasonings.
Debe ọtụtụ ite, wụsa mmiri ma tinye otu bọta.
Na-atọ ụtọ na oven maka minit 45 na ogo 180.
Nri salad na ọkụkọ
Pasta na ọkụkọ na mushrooms
Nri imeju na ude mmirimiri - esi esi kwadebe ihe na-esi ísì ụtọ ma dị nro?
Salad na ginger
Kedu ihe ga-esi nri?
Ketchup si tomato mado
Nri si tomato na garlic
Casserole si dumplings - "Nwanyị na-agwụ ike"
Ofe anụcha anụ - ihe nchịkọta dị mfe maka ihe na-atọ ụtọ na obi ụtọ
Pilaf dị ụtọ
Hotwiches chara acha na painiapulu
Chinese ụtọ na utoojoo ihendori
Nri na mgwakota agwa - nhazi mbu nke nri di uto
Karịa iji tụgharịa ihe na-acha ọkụ maka mbọ?
Basal okpomọkụ na kwa ọnwa
Uwe akwa uwe ejiji
Ime ụlọ maka igwe ọkụ ọkụ
Plot na hemorrhoid
Ngwa "ndakpu mmiri" - nkọwa
Inye aka nke nwa amuru
Jennifer Lopez na Casper Smart
Gini ka apughi ime mgbe ememe sacrament?
Kedu carol nke ọma?
Pink lichen - ihe kpatara na iwu maka ọgwụgwọ ọrịa Zhibera
Sherlock Holmes Museum na London
Herpes virus - ọgwụgwọ
Nitrofos fatịlaịza - ngwa
Okike - Mmiri 2015
Igbe nke ndị na-ese ihe
Mgwakota agwa maka Ossetian pies
Green borscht - uzommeputa
Ulo mara mma n'ime ime
Kedu ụdị edozi isi ugbu a?
Ụdị nwoke kachasị mma